वुहानबाट नेपालीको उद्धार कहिले ? – मिथिला दैनिक
मिथिला दैनिक १८ माघ २०७६, शनिबार ०७:५६
काठमाडौँ — नोवल कोरोना भइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या विश्वभर १० हजार नाघेको छ भने मृतकको संख्या शुक्रबार बिहानसम्ममा २१३ पुगेको छ । यस्तै यो विश्वका २० राष्ट्रमा देखिएको पुष्टि भइसकेको छ । तर, चीनमा बाहेक अन्यत्र भेटिएका संक्रमितको भने मृत्यु भएको छैन ।
दक्षिणपश्चिम चीनकाे चाेङिकिङ नगरपालिकामा यात्रुहरुकाे शारीरिक तापक्रम मापन गर्दै एक कर्मचारी । तस्बिर : सिन्ह्वा
संक्रमण फैलन सुरु गरेको चीनको हुबेइ प्रान्तको वुहान सहरबाट विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकहरुको धमाधम उद्धार गरिरहेका छन्। सुरुमा अमेरिकाले वुहानस्थित आफ्नो कन्सुलेटमा कार्यरत कर्मचारी तथा केही नागरिकलाई उद्धार गरेको थियो। त्यसपछि भने जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, फ्रान्स, ईयू राष्ट्रहरुले पनि आफ्ना नागरिकलाई वुहानबाट फिर्ता लगिरहेका छन्।
दक्षिण एसियाका भारत, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका देशले पनि आफ्ना नागरिकहरुलाई त्यहाँबाट उद्धार गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका छन्। तर, नेपाल सरकारले भने हालसम्म उद्धार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरिरहेको छ।
उता वुहानमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरु भने दिनादुदिन भयभित अवस्थामा उद्धारको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। वुहानबाट सम्पर्कमा आएका अधिकांश नेपालीले आफूहरु तत्काल नेपाल फर्कन चाहिरहेको र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने खर्च समेत आफैं व्यहोर्नेसम्मका प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
२००२–२००३ मा चीनबाट नै विश्वभर फैलिएको ‘सार्स’भन्दा पनि यो भाइरस द्रूत गतिमा फैलिरहेको देखिन्छ। चीनभर यसका संक्रमित देखिएका छन् भने अलि बढी प्रभावित २० वटा सहरलाई चिनियाँ सरकारले ‘लकडाउन’ नै गरेको छ। संक्रमणको केन्द्र वुहानमा मात्रै ५ करोड बढी मानिस लकडाउनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। त्यहाँ लगभग ६२ हाराहारी नेपालीहरु रहेको बताइएको छ। यस्तै हुबेइ प्रान्तमा रहेका नेपालीहरुको गणना गर्ने हो भने यो संख्या १७७ माथि पुग्छ।
नेपालीको उद्धार कहिले?
सामान्य रोगको उपचारका लागि समेत राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउन दौडने नेताहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै आपतकाल घोषणा गरेको भाइरसको संक्रमणबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन भने उदासिन देखिएका छन्। यसले वुहानमा रहेका नेपालीलाई विचलित बनाएको छ।
विश्वभर फैलिएको संक्रमणका एकजना बिरामी नेपालमा पनि फेला परेका छन्। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै समिति बनाएर यसलाई नेपालमा फैलन नदिन लागिरहेको दाबी सरकारले गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले नेपालीहरुलाई वुहानबाट उद्धार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको दाबी हरेक पत्रकार सम्मेलनमा गरिरहेका छन्।
बेइजिङस्थित दूतावास भने नेपालीहरको उद्धार गर्नका लागि ढिला गर्न नहुने मनस्थितिमा पुगिसकेको छ। तर नेपाल सरकारले देखाएको उदासिनताका कारण भने नियोग अन्यौलमा परेको छ। एकातर्फ नेपालीहरुले दिनरात दूतावासमा सम्पर्क गरेर उद्धारका लागि समन्वय गरिदिन अनुनय विनय गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारले उद्धारका लागि कुनै योजना नदिादा उनीहरुसँग सम्पर्कमा रहेका नेपालीहरुलाई दिन कुनै जवाफ नै छैन।
वुहानका विभिन्न विश्वविद्यालयका होस्टलमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई हाल विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले नै खाद्य सामाग्री उपलब्ध गराउन थालेको छ। तर होस्टल बाहिर रहेका विद्यार्थीको हविगत भने दयनीय रहेको आंकलन मात्रै गर्न सकिन्छ।आफ्नो विश्वविद्यालयमा आफूसागै अध्ययन गरिरहेका विदेशी विद्यार्थीहरु धमाधम घर फर्कीरहेको अवस्थामा नेपालीहरु भने अन्यौलताको बन्दी बन्नुपर्दा उनीहरु थप मानसिक त्रासमा रहेको स्पष्ट हुन्छ।
स्वस्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले अध्ययनका क्रममा वा कामको सिलसिलामा चीन गएका नेपालीहरुमा अहिलेसम्म कुनै संक्रमण नदेखिएको बताउादै अहिले नै फिर्ता गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँदै आएका छन्।
‘फिर्ता बोलाउने तयारी छ। तर अहिले नै बोलाइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। फिर्ता बोलाएपछि अमेरिका लगायतका देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न टापुमा लगेर १५ दिनका लागि राखेको छ,’ उनले बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘हामीले फिर्ता बोलाएपछि कहाा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। आर्मीले आफ्नो ब्यारेकमा कतिसम्म राख्न सक्छ भनेर पनि छलफल भएको छ। फिर्ता बोलाएपछि उनीहरुलाई १५ दिन छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ।’
वुहानमा रहेका नेपालीहरुलाई फिर्ता ल्याउँदा यहाँ पनि संक्रमण भित्रिने त्रास जायन हुनसक्छ। तर त्यसो भन्दैमा आफ्ना देशका नागरिकलाई संक्रमणको अत्याधिक सम्भवना भएको क्षेत्रबाट उद्धार नगर्ने सरकारको सोचलाई भने न्यायोचित मान्न सकिन्न।
चीन सरकारले कुनै पनि देशले आफ्नो नागरिकलाई लान चाहेको अवस्थामा पूर्व परिक्षण गरेर कुनै प्रकारको लक्षण तथा संक्रमण नदेखिएकालाई लाने अनुमति दिने गरेको छ। त्यसरी फिर्ता लगिएका नागरिकलाई कसरी क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ र संक्रमण देखिए कसरी उपचार गरिन्छ भन्ने योजना भने चीनले सम्बद्ध देशसँग माग्ने गरेको छ।
अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुले पनि यी सबै जानकारी चीन सरकारलाई उपलब्ध गराएर आफ्ना नागरिकहरुको उद्धार गरेको हो। यस्तोमा नेपाल सरकारले पनि संक्रमणको केन्द्रबाट नागरिकको उद्धार गर्नका लागि योजना बनाउन भने जरुरी छ। तर स्रोतका अनुसार नेपाल सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै योजना नै बनाएको छैन।
कोरोना भाइरसका बारे केही तथ्य
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना भइरसले सामान्य रुघाखोकीदेखि लिएर सार्स र मियर्सजस्ता जटिल प्रकारका स्वासप्रस्वास सम्बन्धी रोग लगाउन सक्छ। यो भाइरस जनावरबाट मानिसमा सरेको हो। जस्तै कि सार्स बिरालोबाट मानिसमा सरेको थियो भने मियर्स ऊाटबाट मानिसमा सरेको थियो।
अन्य प्रकारका कोरोना भाइरस पनि जनावरहरुमा देखिएको छ, तर ती मानिसमा भने सरेका छैनन्। नोवल कोरोना भइरस भने चिनियाँ अधिकारीहरुले जनवरी ७ मा पत्ता लगाएका हुन् र त्यसको नामक २०१९–एनसीओभी राखेका छन्। यो मानिसहरुमा देखिएकामध्ये नयाँ प्रकारको कोरोना भइरस हो।
डब्लूएचओका अनुसार यसका लक्षणहरुमा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, स्वास फेर्न गाह्रो हुने लगायतका समस्या देखिन्छ। केही जटिल अवस्थामा यसले निमोनियाका साथै स्वासप्रस्वासमा गम्भिर समस्या गराउन र मिर्गौलालाई नै फेल गरिदिन पनि सक्छ।
यस भाइरस कुनैपनि स्वास्थ्य मानिसमा सरेको १० देखि १४ दिन भित्रमा असर देखाउन सक्छ। यद्यपि यो समयावधीलाई वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि भने गर्न सकिएको छैन। यो अनुमान मात्रै हो।
कुन देशमा कति संक्रमित?
शुक्रबार साँझसम्म प्राप्त गरिएको तथ्यांक अनुसार विश्वमा चीन बाहेकका २० राष्ट्रमा यसका संक्रमितहरु देखिएका छन्। चीन बाहिर संक्रमित भएकाहरुको संख्या १३० रहेको छ भने उपचारमा रहेका कसैको पनि मृत्यु भएको छैन।
शुक्रबार संक्रमणकै इटलीले पनि संकटकाल घोषणा गरेको छ। यस्तै उसले चीनबाट इटाली आउने सबै विमानलाई रोक लगाएको छ। यस्तै म्यानमारले पनि चाइना साउदर्नको विमानलाई अवतरण अनुमति नदिएर फिर्ता पठाइदिएको छ। सिंगापुर, अमेरिका, ओमान लगायतका देशले चीन भ्रमणमा नजान आफ्ना नागरिकलाई ट्राभल एड्भाइजरी नै जारी गरेका छन्। टर्किस एयरलाइन्स, ब्रिटिस एयरवेज, भियटजेट, रुवाण्ड एयर, केन्या एयर लगायतले आफ्ना चीन उडान अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि रद्द गरिएको बताएका छन्।
साथै भियतनामले सबै चिनियाँ पर्यटक भिसालाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
जापान – १४
थाइल्याण्ड – १४
सिंगापुर – १३
हङकङ – १२
अस्ट्रेलिया – ९
ताइवान – ९
मलेसिया – ८
मकाउ – ७
फ्रान्स – ६
अमेरिका – ६
भियतनाम – ५
जर्मनी – ५
यूएई – ४
इटाली – २
बेलायत – २
क्याम्बोडिया – १
भारत – १
फिलिपिन्स – १
वैवाहिक बलात्कार गर्ने श्रीमानलाई घर नजान अदालतको आदेश
२ असार २०७७, मंगलवार १८:५२